Akụkọ - Gịnị kpatara ụmụ nwoke ji eji ịcha afụ ọnụ mgbe ọ na -atọ ha ụtọ ịkpụ afụ ọnụ?
Kedu ihe kpatara ụmụ nwoke ji eji ịcha afụ ọnụ mgbe oge ịcha afụ na -atọ ha ụtọ?
Mgbe m bụ nwata, a na m eso ndị okenye gaa ebe a na-akpụ isi nke steeti, n'ihi na amalitebeghị m ito afụ ọnụ n'oge ahụ, enweghịkwa m ọfụma ọ bụla, yabụ enwere m ebe nchekwa miri emi. nke usoro ịkpụ afụ okenye etina.
Nzọụkwụ ndị a yiri ka nke a, buru ụzọ were akwa nhicha ọkụ wee kechie egbugbere ọnụ iji mee ka ajị agba dị nro. N'otu oge ahụ, onye na -edozi isi na -aga n'ihu na -atụgharị obere ahịhịa n'ime obere efere, ọtụtụ ụfụfụ ga -apụta obere oge, were akwa nhicha ahụ tinye ya na agba, egbugbere ọnụ na ihu. Mgbe ngwa ahụ gasịrị, onye na -akpụ isi wepụtara agụba kwụ ọtọ na -egbu maramara ma tee ya na akwa n'elu mgbidi ọtụtụ ugboro n'emeghị ngwa ngwa tupu ọ malite kụọ ihu ụfụfụ, na -akwụsịtụ. M ga -esokwa ndị ahịa ma ọ bụ ndị nọ m nso kparịta ụka.
Usoro a niile yiri ka akpachapụrụ anya na akpachapụghị anya. Ma ọ bụ nwata ma ọ bụ okenye, onye na -akpụ afụ ọnụ mara nka ma dị mfe ịbịa, dị ka ihu amịkpọ. Mgbe a kpụchara afụ ọnụ ya, ihu onye ahịa yiri ka ọ dị ọcha, dịkwa nro, jupụta n'ìhè. Onye ahịa ọ bụla kpụrụ afụ ọnụ ya ga -enwe afọ ojuju na enyo wee metụ agba ya aka, nwee obi ike zuru oke, dịka a ga -asị na ọ bụ nlọghachi nke Pan An, nwere ọmarịcha ọmarịcha.
Nke a bụ ezigbo ọmentụ, echere m ya mgbe niile mgbe m dị obere.
Mgbe m tolitere, ụdị ihe ọkụ eletrik na ịkpụ afụ ọnụ niile aghọọla ewu ewu, ebe a na-eme ntutu isi na-ewu ewu ebe niile, ụlọ ahịa ndị na-akpụ isi n'oge ochie na-agbadakwa, ị nwere ike ịdabere naanị na onwe gị ka ị nwee ịnụ ụtọ ịkpụ afụ ọnụ.
Gịnị mere ị ga -eji jiri ajị afụ ọnụ:
Amụma nke ọgbara ọhụrụ dị ngwa karịa ka ọ dị na mbụ. Ịkpụ afụ ọnụ kwa ụtụtụ, kedu ka esi achọta nguzozi n'etiti arụmọrụ na nkasi obi? Ntucha ịcha afụ dị mma na ncha ịcha afụ ọnụ dị oke mkpa ka ụmụ nwoke nwee anụrị. ihe.
1. Mepụta ụfụfụ bara ụba na nke zuru oke iji kpuchie ajị agba.
2. Hichaa miri griiz na unyi nke ajị agba.
3. Mee ka afụ ọnụ dị nro, mee ka akpụkpọ ahụ dịkwuo nro, ma zere mgbakasị agụba na imebi akpụkpọ ahụ mgbe akpachaghị anụ ahụ.
4. Mgbapụ dị nro.
5. Jiri nwayọ na -ada ụda, nke bụkwa ihe kacha mkpa kpatara ya. Ọ na -enye ohere maka afụ ọnụ ka ọ gbarụọ n'ihu, na -eme ka ọ dị mfe ịkpụ afụ ọnụ, ka ị nwee ike ịnụ ụtọ usoro a.
N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa nsogbu na naanị, ị chọghị nchacha afụ ọnụ, ọ bụrụhaala na ị naghị eji ncha ịcha afụ ọnụ. N'ozuzu, ọ bụ ntakịrị ntakịrị ude ịkpụ afụ ọnụ ka achọrọ. Jiri mkpịsị aka gị tinye ya na ihu gị wee tee ya mmanụ maka ọkara nkeji ruo otu nkeji. Ọ nwekwara ike mepụta obere ụfụfụ buru ibu. Ihe a na -ekwu bụ na afụ ọnụ adịghị oke oke, dị ike, ọ bụghịkwa ogologo. Ọ bụ naanị na ọ nweghị ike nweta nsonaazụ exfoliating na jiri nwayọ nwayọ, na ahụ adịchaghị ya mma. Nrọ dị nro, nke na -agbọ ụfụfụ na -enye ume ọhụrụ.
Ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Mee Ncha, Nịm etemeete ahịhịa, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ,